सकारात्मक सन्देश - पाठकको पत्र - नेपाल
मुलुकको समुन्नतिका लागि सम्भावित ब्रान्डबारे नेपालको खोजी गजबको छ । यी ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मात्र होइन, देशभित्रै पनि अझ परिस्कृत बनाउन सक्ने हो भने मुलुकको पर्यटनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । तिनै कुराका लागि धेरै पर्यटक नेपाल आउनेछन् । यसका लागि हामीले सकारात्मक भएर संसारभर आफ्नो चर्चा गर्नुपर्छ । एकाध नकारात्मक कुरालाई पछि पार्दै अब समृद्धिको ढोका उघार्ने बेला आइसक्यो ।
- ठाकुर भट्ट
नेपालले नयाँ बहसको सुरुआत गरेको छ ( समृद्धिका १० द्वार, १७ साउन)। ब्रान्ड नेपालीका नाममा छनोट गरिएका १० क्षेत्र निश्चय नै हाम्रा गतिला ब्रान्ड बन्न सक्ने क्षेत्र हुन्। तर, यसबारे अझ घनीभूत छलफल र अध्ययन हुन सक्यो भने हामीले सोच्दै नसोचेका विषय पहिचान हुन सक्छन्। यी हाम्रो मुलुकका लागि ‘सफ्ट पावर’का माध्यम पनि हुन्। खुला कूटनीतिको अवधारणा विश्वभर फैलिरहँदा मुलुकबाहिरका नेपाली विद्यार्थी र गैरआवासीय नेपाली–मार्फत यो अभियानलाई अझ विस् तार गर्न सकिन्छ कि !
- दीपेन्द्र आचार्य
नवलपरासी, हाल : जर्मनी
– कफीजस् तै अन्य कुन कुन कृषि उपज हाम्रा लागि अधिकतम फलदायी छन् भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । हाम्रा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित कफीको अहिले संसारभरि माग छ। उत्पादनले माग धान्न सकेको छैन, कृषकले पनि मनग्य कमाएका छन्। तर, त्यस् ता पहाडी क्षेत्र अझै पनि अनगिन्ती छन्, जहाँ वर्षभरि पसिना चुहाउँदा पनि तीन महिना गुजारा गर्न समेत धौधौ छ। जनसंख्याको ठूलो हिस् सा कृषिमा लागेको भए पनि हाम्रो आर्थिक अवस् थामा सुधार नआउनुको कारण यही हो। हाम्रो विशिष्ट हावापानी अति दुर्लभ जडीबुटीका लागि अति उपयोगी छन्। त्यतातिर ध्यान दिनुपर्‍यो। पैसा मनग्य छ भने खाद्यान्न त अन्य मुलुकबाट पनि आयात गर्न सकियो नि † कृषकलाई निर्वाहमुखी बनाउन होइन, धनी बनाउनतिर केन्द्रित होऔँ।
- प्रवीण रञ्जित
जनताले बुझ्ने संविधान देऊ
हामीले चाहेको जनताको संविधान हो तर त्यही संविधान जनताले नै बुझ्न नसक्ने बनाउन खोजिँदै छ (घुमाउरो होइन, सीधा समाजवादको पक्षमा, १७ साउन)। संविधानको मस् यौदा यति जटिल बनाइएको छ कि मै हुँ भन्ने विद्वान्लाई पनि पढ्दा पढ्दै रिँगटा लाग्छ। त्यस् तोमा आमजनताले संविधानद्वारा आफ्ना हक अधिकार र समुन्नति सुनिश्चित भएको कसरी निक्र्योल गर्ने ? गम्भीर कुरा के भने जहाँ जहाँ गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई शासकैपिच्छे आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र राज्यसत्तामा पकड जमाउने खेल भइरहन्छ। ०४६ सालको संविधानमा पनि त्यही भयो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानका केही धारालाई त्यसरी नै प्रयोग गरे। आखिर दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संविधान भनिए पनि त्यसले आफ्नो अस् ितत्व रक्षा गर्न सकेन। अहिलेको संविधानमा पनि समाजवाद शब्दको प्रयोग खुब गरिएको छ, जसका बारेमा स् वयं दलका नेताहरू नै एकमत छैनन्। हो, संविधान संशोधन हुन सक्छ। तर, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कम्तीमा जनताले बुझ्ने हुनुपर्छ। नत्र, कुनै दिन यही समाजवादजस् ता शब्द संविधानका लागि घातक साबित हुनेछन्।
मन्त्री लालबाबु पण्डितजस् ता सपुतहरूका कारण नै हो, देशप्रति युवाको मन मर्न नपाएको (सादा जीवन, जब्बर अडान, १७ साउन)। हुन त मुलुकमा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिको कुनै कमी छैन। तर, त्यस् ता व्यक्ति नेतृत्वमा आउनै पाउँदैनन्। नेतृत्वसम्म पुग्नका लागि जालझेल गर्नुपर्छ, चाकडी गर्नुपर्छ र अहिले त पैसा खोलोसरि बगाउनुपर्ने बाध्यतासमेत सिर्जना भएको छ। कोही व्यक्ति इमानदार नै छ भने पनि यति धेरै खुराफात गर्दागर्दै इमान–स् वाभिमान सबै लोप भइसक्छ। तर, पण्डितजस् ता व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नु आफैँमा उपलब्धि हो। एक व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नासाथ उसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा देखिइहाल्छ। पण्डित मात्र होइन, प्रशासन, प्रहरी, स् वास् थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा यस् तै अडान भएका अरू व्यक्ति पनि छन्, जसको एक्लो अडानले ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस् ता व्यक्तिलाई जनताको लाख लाख समर्थन छ।
- शैलेश राजकर
सिड्नी, अस् ट्रेलिया
– सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सादा जीवन र उच्च विचारको कदर नगरी बस् न सकिन्न। देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर कसम खाएका र राष्ट्रसेवक कहलिएका सरकारी कर्मचारी जसले पीआर र ग्रिनकार्ड पाएका छन्, ले अझै पनि आफूले खाइपाई आएको सरकारी सुविधा छोड्न चाहँदैनन्। यस् ता कर्मचारीलाई अयोग्य साबित गर्नु वास् तवमा स् वागतयोग्य कदम हो। मन्त्री पण्डितले त्यस् ता ग्रिनकार्ड र पीआरधारी कर्मचारीलाई कि त पीआर र ग्रिनकार्ड त्याग्नुपर्ने कि पद भनेर नियम बनाएका छन्, जसले सरकारी कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्।
राजनीतिको लामो रेसमा पण्डितले कहिल्यै लाभको लोभ गरेनन्। इमानदारी र सरलतामा रमाइरहे। यस् तो गरिमामय मन्त्री पदमा बसेका उनले आफूले सुविधामा पाएको सवारीसाधन पनि सरकारलाई फिर्ता गरिदिए। लोभलालच नभएका लालबाबु पण्डितजस् तै हाम्रा अन्य नेताले पनि पद र विलासिताको लोभ नगर्ने र इमानदार हुने हो भने देशले पक्कै पनि काँचुली फेर्नेछ। मन्त्री पण्डितको कामको प्रशंसा अवश्य गर्नुपर्छ तर आवश्यकभन्दा बढी प्रशंसा गरेर उनलाई आफ्नो काम आफ्नै तरिकाले गर्नबाट चाहिँ नरोकौँ।
- प्रतीक्षा बडाल
बालबालिकाको उचित पालनपोषणमा सरकार गम्भीर होस् (बिचल्लीमा बालबालिका, १७ साउन)। भूकम्पपछि ठूलो संख्यामा बालबालिका सहाराविहीन भएका छन्। कतिपय ठाउँमा त बालगृहसमेत क्षतिग्रस् त भएकाले बालबालिकाको अवस् था झन् जर्जर छ। अहिले बालबालिकाको समुचित विकासमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने भोलिका दिनमा राज्यलाई झन् ठूलो समस् या आउन सक्छ। बालबालिका त काँचो माटो हुन्, तिनीहरूलाई जस् तो स् वरूप दिए पनि हुन्छ। तर, तिनै बालबालिका ठूला भइसकेपछि राज्यका लागि समस् या बन्न थाले भने चाहेर पनि बाटो देखाउन मुस्किल पर्छ। उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो।
- कौशल गुरुङ
तटस्थता खोइ ?
सामान्य समस् या देखिएका बेला एउटा पक्षलाई उचाल्ने र अर्को पक्षलाई थचार्ने कामले पूरै क्रिकेट क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्ने त होइन (उल्टो गति, १७ साउन) ? अहिले नेपाली क्रिकेटमा केही समस् याचाहिँ देखिएकै हो। फेरि यसमा कप्तान र प्रशिक्षकको मात्रै गल्ती छ भन्न मिल्दैन। विगतमा क्यानले भ्रष्टाचार गरेको कुरा साँचो हो र अहिले उनीहरूले यस् तो भन्नु स् वाभाविक हो। तर, खेलाडी छनोटलगायत अभ्यासका कुरामा धेरै सोचविचार गर्नु जरुरी छ। आरोप/प्रत्यारोपमा नअल्झी नेपाल सरकार, क्यान, प्रशिक्षक र कप्तानले बसेर व्यापक छलफल गरी नेपाली क्रिकेटलाई उकास् नतिर लागौँ।
- लोकेन्द्र घताल
प्रकाशित: श्रावण १७, २०७२